को हुन् गौचनका हत्यारा ? – Saurahaonline.com
को हुन् गौचनका हत्यारा ?
काठमाडोँ, २५ असोज । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हतयाको एक दिन वितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधीबारे कुने सुँईको पाउन सकेको छैन ।
सोमबार दिउँसो घरबाट गाडी चढेर निस्केको गौचनको अज्ञात समहुले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।गोली हानेलगत्तै दुई युवा मोटरसाईकल चढी बेपत्ता भएका थिए ।
प्रहरीले गौचनको हत्यामा सार्व सुटरको प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।छाती र पेटमा लगातार तीन गोली प्रहार भएलगत्तै अचेत भएका गौचनको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु भएको थियो ।
गत चैतमा गौरीघाटको एक फिटनेस क्लबमा रहेका गुन्डा दावा लामामाथि गोली हानेको घटनामा पनि लोप्साङले जिम्मेवारी लिएका थिए । लामा र गौचन दुवैमाथि उस्तै प्रकृतिले गोली हानिएकाले पनि प्रहरीले पुनको समूहको संलग्नता हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।